Nitondra ny heviny mahakasika ny famerenan’ny Fitondram-panjakana ankehitriny ireo akanjon’ny Mpanjaka Ranavalona III sy ny vakoka maromaro niaraka taminy saika hatao lavanty tao Kerry Taylor, Londres, ny Tale miandraikitra ny fandraisana fitarainana ao Ambohitsirohitra, Richardson Rakotomanana, izay sady mpanao gazety no filoha nasionalin’ny Fikambanana manandratra ny zo aman-kasina maha-olona na APDH. 10 décembre 2020
Tao anatin’io « Lot n°51 » io dia nisy ilay akanjo tsara tarehin’i Printsesy Ramasindrazana izay nenitoan’ny Mpanjakavavy Ranavalona III no sady mpanolotsaina ara-politikany. Io printsesy io no niara-nonina taminy nandritra ny naha sesitany azy. Misy ihany koa sary maro isan-karazany izay mbola tsy nisy nanana hatreto. Hita niaraka tamin’ireo koa ny taratasy nifanoratana isan-karazany, « carte postale » marobe, ny diarin-dRamatoa Clara Herbert, ny ferapara fiambohon-dRanavalona III ary fitaovana vitsivitsy.
Avy aiza ireo zavatra ireo ?
Ireo dia zavatra nangonin-dRamatoa Clara Herbert ho fahatsiarovana. I Clara Herbert dia ramatoa avy any Irlande niasa naharitra ho an’i Mpanjakavavy Ranavalona III nandritra ny sesitany manontolo. I Clara Herbert koa dia mahay miteny anglisy, frantsay, malagasy ary mahay teny sinoa koa. Rehefa niamboho nefa ny Mpanjakavavy ny taona 1917 dia mbola nijanona niaraka tamin’ny Printsesy Ramasindrazana i Clara Herbert ary niara-niaina taminy tany amin’i Alpes-Maritimes Frantsa. Rehefa maty kosa ny Printsesy dia niasa tao Nice Frantsa ho ana mpanan-karena italianina i Clara Herbert. Niverina kely tany Ireland izy ary avy eo lasa nandeha nanao misionera protestanta tany Chine. Fahatsiarovana notazomin’i Clara Herbert ireto zavatra ireto ary tsy zavatra nivoaka avy eto Madagasikara fa nampiasain’ny fianakavian’ny Mpanjakavavy nandritra ny sesitany sy ny fandehandehanany rehetra tany ivelany tany.